कोरोना महामारीले गर्दा पारम्परिक ढंग परिवर्तन भएर गएको छ। त्यो पढ़ाइ लेखाई होस्‌ वा कार्य गर्ने पद्धति। वर्कफ्रम होम तथा डिजीटल प्लेटफर्मबाट सभा-गोष्ठीहरू एवं विविध कार्यक्रमहरू आज सामान्य भएका छन्‌। कोरोना महामारीकै समयमा प्रायः3महिना अघि आइ.आइ.टी. मुम्बईको भर्चुअल कन्भोकेशन कार्यक्रमले धेरै चर्चा पाएको थियो। इन्स्टिट्युटले भर्चुअल रियलिटी तकनिक व्यवहार गरेर आफ्नो ग्रेजुएट्‌सहरूलाई पहिलो चोटी भर्चुअल पद्धतिमा दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेको थियो। उक्त भर्चुअल कन्भोकेशनको निम्ति प्रत्येक छात्रको डिजिटल अवतार तयार गरिएको थियो। छात्र आफ्नो घरमा थिए तर उसको डिजिटल अवतार कलेज केम्पसमा थियो। जसलाई डिग्री प्रदान गरियो। यसबाहेक गुगल, ख्यलको भर्चुअल असिस्टेन्टको उदाहरण हाम्रो अघि छ।
कोरोना महामारी पछि भिडियो गेमिङ्ग छोड़ेर विभिन्न उद्योगमा पनि यो तक्निकको व्यवहार गर्नेबारे अहिले खोजबिन भइरहेछ। विशेष गरेर आउँदो वर्षहरूमा यस तक्निकको सहायताले नानीहरूलाई पढ़ाउन, जब ट्रेनिङ्ग, हेल्थकेयर, टेलीकम, अटोमोेटिभ, एयरोस्पेस, डिफेन्स, साइबर सेक्युरिटी, रिटेल, इन्टरटेन्टमेन्ट आदि सेक्टरहरूमा व्यापक मात्रमा यसको व्यवहार हुँदा धेरै नोकरीहरू सृष्टि हुनेछ।
भर्चुअल रियलिटीको शाब्दिक अर्थ हुन्छ आभासी सच्चाई। अर्थात्‌ तपार्इंलाई सबैथोक सत्य देखिनेछ तर वास्तवमा त्यो आभासी हुँदछ। यसको व्यवहार गर्दा यस्तो अनुभव हुन्छ कि वास्तवमा तपार्इंको अघि नै सबैथोक भइरहेछ अर्थात्‌ तपार्इं स्वयं त्यो माहौलमा हुनुहुन्छ यस घटनालाई नै भीआर भनिन्छ। यसको एडभान्स लेवललाई अग्मेन्टेन्ड भर्चुअल रियलिटी भनिन्छ।
भिडियो गेमिङ्गपछि कोरोना संकटको समयमा भर्चुअल पद्धतिले पढ़ाई-लेखाईदेखि लिएर जब, ट्रेनिङ्ग तथा समारोहतिर अण्मेन्टेन्ड भर्चुअल रियलिटी तक्निकको व्यवहारले यो एउटा नयाँ क्षेत्र भएर हाम्रो अघि आएको छ।
भीआर/एआर टेक्नोलोजीमा दक्षता हासिल गर्न कम्प्यूटर साइन्स वा कम्प्यूटर इञ्जीनियरमा डिग्री हुन आवश्यक छ।
यसबाहेक डिजाइनिङ्ग कोर्स गरेर पनि यस फील्डमा जान सकिन्छ। बेसिक कोर्स गरेर एआर/भी.आर तक्निक व्यवहार गर्ने कुनै पनि कम्पनीमा इन्टर्नशिप गरेर अघि बढ्‌न सकिन्छ। आगामी 2025 सम्म प्रायः 38% को वार्षिक दरले एआर/भीआरको वैश्विक मार्केट बढ्‌ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। ग्लोबल एनालिसिस एण्ड इण्डस्ट्री फोरकास्टको सर्वे अनुसार 68% को दरले गेमिङ्ग इण्डस्ट्रीको वृद्धि भइरहेछ जहाँ भीआर तक्निकको व्यवहार भइरहेछ।
भर्खरै सैमसङ्ग इण्डियाको तर्फबाट आइ.आइ.टी. जोधपुरमा एआर-भीआर लैबको शुरू गरिएको छ। यहाँ स्टुडेन्टलाई अग्मेन्टेड रियलिटी, भर्चुअल रियलिटी तथा मिक्सड रियलिटी जस्ता नयाँ तकनिकको जानकारी दिइन्छ। यो कोर्स कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इञ्जीनियरिङ्ग विभागको विटेक, एमटेक तथा पीएचडी स्टुडेन्ट्‌सको निम्ति हो। कोर्स अवधि 14 हप्ता। यसबाहेक सैमसङ्ग लैब आइआइटी दिल्ली, खड़कपुर, रूडकी, गुवाहाटी आदि ठाउँहरूमा अघिबाटै सञ्चालित भइरहेका छन्‌। कोर्सेरा, उडेमी आदिमा यसका अनलाइन कोर्स उपलब्ध छन्‌।
01पारसदेखि दुर्गासम्म हाम्रो पीर एकै थियो
02आध्यात्मिक चिन्तन जनवरी 2021
03प्रतिभाशाली लोमस ढुङ्गेल - हरियो माखाका हरियो सङ्‌केत
05कोरोना संक्रमणको प्रकोप अनि डामाडोल स्थिति
16 21:38:01 Oct 2021